HIM | Health in Myanmar » 2015 » March
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, STD, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေထဲက ဂနိုရီးယား၊ (ကလာမိုင်ဒီယား)၊ (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်)၊ (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)၊ လိင်လမ်း ရေယုံ တွေ ကနေ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ HPV လိင်လမ်း-ကြွက်နို့ကနေ အဲလို ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ Mayo Clinic ကတော့ သက်သေ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, ကလေး, အမျိုးသမီး, ဧရာဝတီ
၂၀၃၀ မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ AIDS Free Generation ဖြစ်ဖို့ UNAIDS က ရည်မှန်းထားပြီး အဲဒီ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ဆီကို မရောက်ခင် စပ်ကြားမှာ မျိုးဆက်နဲ့ချီတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မယ် ဆိုတာ HIV ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၅၀ဝ၀ ကျော်သာမက လူမှုပတ်ဝန်းကျင် တခုလုံး အတွက်၊ နိုင်ငံ အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးတဲ့ အရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: 7day, HIV, နည်းလမ်း
HIV နှင့် ရောင်ရမ်းမှု (Inflammation) တို့က အသက်အရွယ် ကြီးရင့်မှု ဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်၏ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှု ဆိုင်ရာအပိုင်းကို ထိခိုက်အား နည်းစေနိုင်သည်။ ပြင်း ထန်ပါက HIV ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ဆ၀န်စထရွန်းက ထောက်ပြသည်။
အင်ဒီယားနားပြည်နယ်တွင် HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထား
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: 7day, AIDS, HIV
HIV ဗိုင်းရပ်စ်မှာ AIDS ရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ HIV ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ အတွင်းက ပထမဆုံးသိရှိ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့သောတစ်လက HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၆ ဦးရှိ ရာမှ ၇၉ ဦးအထိ ယင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Good reason to be apprehensive
I have been unable to find any scientific evidence that “decentralisation hasatrack-record for reducing discrimination” as UNAIDS is said to have said. The article does not mention one reason that people are loathe to seek care in the public sector. They are treated badly by doctors and nurses there. But care must be […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပြင်သစ်မှာပဲ HIV ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကနေ တရားရုံးမှာ လျှောက်ချက်တင်ကြတယ်။ သူတို့ကို အတင်း သားကြောဖြတ်ခိုင်းလို့ လျှော်ကြေး ရလိုမှု ဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးကနေ ကိုယ့်လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ကိုယ့်မှာ HIV ရှိနေတာကို ထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မညီဖူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
Two views ofaWorld TB Day video
The Global Fund focuses on getting patients to drop in while the Youtube version focuses on the public private partnership. Jamie ++++++++++++++++++ Myanmar: Getting Patients to Drop In When community health volunteer Cherry Moe finds people suffering fromapersistent cough or other symptoms of TB, she has good advice: Go to Dr. Yu Yu […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: SW, လူကုန်ကူး, အမျိုးသမီး, ဧရာဝတီ
တကယ်တော့ လူကုန်ကူးမှုတွေ၊ အဓမ္မကျင့်ခံရမှုတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာ ပြုခြင်းခံရမှုတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်နေတာဖြစ်ပြီး အင်မတန် လှပချောမွေ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားသော “Pretty Woman” ကဲ့သို့ စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက အဖြစ်အပျက်နဲ့ကတော့ တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။
How many cases of TB were found and treated
A tweet from UNOPS arrived on my Twitter timeline yesterday: .@3MDGfund @UNOPS finding&treating #TB in 22 townships #Myanmar #WorldTBDay #Reach3million http://www.3mdg.org/ pic.twitter.com/5mxWE7jjc6 As it was World TB Day I thought I would go to the3MDG Fund site and see how many TB patients they had helped to treat last year in their 22 […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, PLH, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဗြိတိန်မှာ HIV ကို စတွေ့တာ နှစ်ပေါင်း (၃ဝ) ရှိပြီ။ ၁၉၈ဝ ကတည်းက HIV ပိုးတွေ့ထားပြီး ကနေ့ထိ အသက်ရှင်နေသူ အပါအဝင် ဇာတ်လမ်း ကိုယ်စီရှိသူ (၆) ယောက်အကြောင်းကို ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာမှာ ၂၂-၃-၂ဝ၁၅ နေ့က ရေးသား ထားပါတယ်။
Training vs self-regulation
Last week at http://hivinfo4mm.org/general-practice/ I wondered about general practice in Myanmar. Sun Quality Health is one initiative to improve care. http://healthmarketinnovations.org/program/sun-quality-health-network-myanmar But I still cannot find information on these other efforts. “Boston University, the Australian College of GPs and the RCGP (via the Thames Valley and East Anglia faculties) are involved in various degrees. The […]